Efa atsy amin’ny Nosy Maorisy, hatry ny omaly ny filoha Rajaonarimampianina. Hanasonia ny fifanarahana amin’ny hametrahana ny faritra ara-toekarena manokana (Zes) any Ehoala miaraka amin-dry zareo Maorisianina ny tenany. Hanatrika ny faha-48 taona nahazoan’ity Nosy ity ny Fahaleovantenany koa.
Hiompana amin’ny varotra, ny jono, ny fizahantany, fahasalamana sy ny fampahalalam-baovao ity fifanarahana ity ary hiteraka asa ankolaka sy mivantana koa.
Nandray ny iraka manokan’ny FMI ho an’i Afrika, Nguéto Tiraina Yambaye ny filoha Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha. Nivoitra ny fahafaham-pon’ny mpamatsy vola teto amintsika. Nambaran’izy ireo fa anisan’ireo firenena azo itokisana amin’ny fampisamboram-bola i Madagasikara.
Miandry ny didim-panjakana fanaikana mpifidy sy ny datim-pifidianana eny amin’ny faritra ny eo anivon’ny Ceni, araka ny nambaran-dRakotonarivo Thierry, afakomaly tao amin’ny RNM. « Miandry ny filankevitry ny governemanta izahay amin’ireo pitsopitson-dalàna manodidina izany. Eo ny birao fandatsaham-bato, ny lisitry ny mpifidy vaventy… », hoy izy.
Nilaza ny tsy hihemotra hitaky ireo Nosy manodidina ry Rajaonah Andrianjaka. Ho eny amin’ny tsangambaton’ny MDRM Ambohijatovo izy ireo ary manentana ny rehetra ny 29 marsa izao, araka ny fanehoan-keviny tamin’ny haino aman-jery, omaly. « Tsy hijanona izany raha tsy tafaverina amintsika ny tanintsika eo an-tanan’i Frantsa », hoy izy.
Tsiahivina fa voasakan’ny Emmo/Reg hatrany ireo hetsika telo teo aloha noho ny tsy nahazoan’izy ireo alalana teny Ambohijatovo.